Semalt Expert Anotsanangura Maitiro Aungaita Kushandura KweWebhu
Nhasi tsvakurudzo dzewebhu dzinoedza kutsvaga deta yakawanda pawebsite dzakasiyana-siyana kuti dzipedze mapurogiramu avo uye inouya nemigumisiro inofadza inogona kuvabatsira kuvandudza mabhizinesi avo. Kuti vaite izvi, vanoshandisa webhupu yebhu ing. Iyo nzira itsva uye yakakura, iyo inovabatsira kuti vaunganidze ruzivo kubva pamapeji akasiyana-siyana ewebhu pakarepo. Nenzira iyi, vanogona kuunganidza mabhanga makuru ezvinyorwa zvinokosha kunze kwekuti vaite basa rose nemaoko. Izvi zvinotevera murayiridzi mukuru wekuti vanogona sei kushandisa web scraping.
Kana uchida kutsvaga tsvaga yekutengesa kana mitengo yemiti kana mamwe mazita, inoda kushandisa web browser - promod logo name generator. Nokushandisa web scraping, basa rinoitwa nekungoita kodeti (inozivikanwawo se 'scraper'). Ichi chinokanganisa chinoita basa rose rekutsvaga kwewebhu. Semuenzaniso, inotsvaga ruzivo rwese rwakakosha iyo vashandisi vanoda kuwana mukati memagwaro akawanda uye kuvashandura muzvimiro zvakatemwa. Iyi data inogona kuva mumifananidzo yemifananidzo, magwaro, zvigadzirwa zvinhu, emails, mafoni adere, mitengo nezvimwe. Zvinhu zvinokosha zvekuziva
Vanhu vanoda kufarira mawebhusayithi vanofanira kuziva kuti peji yewebhu yega yega yakasiyana uye ine zvayo nemitemo yavo. Somuenzaniso, mamwe mawebsite anowanzochinja maitiro avo nguva nenguva. Kuramba nezvose izvi zvinoshandiswa zvinoda kushanda nesimba uye maawa akawanda ekushanda. Tsvakurudzo dzeWebhu zvakare dzinofanirwa kuchenjerera kutevera mitemo. Kana zvisina kudaro, vangave vane matambudziko. Kuita kudaro, vanogona kukopa zvinyorwa mumaminitsi mashoma kubva kune mawebsite akasiyana-siyana kwose kweIndaneti.
Tora zvose Relevant Information
Web scraping inopa mamwe mabhizimisi anobudirira emabhizimisi nevamwe vanhu kuti vaite misika yepamusika. Zvishandiso izvi zvinokosha zvinogona kuvabatsira kuti vawane dambudziko rose rekuita basa ravo, vaongorore zvakakwana uye kuwana mhinduro dzavari kutsvaga. Somugumisiro, vanogona kukunda vadzikwi vavo vanogona kukwanisa kuwedzera kutengesa kwavo pasina nguva. Nokushandisa web scraping tool, vanogona kuchengeta mazita akasiyana-siyana evakagadziri kana vatengesi, pamwe chete nemiti uye zvimwe zvakachengetwa mufaira.
Nokushandisa idzi kugadzira zvishandiso , vatsva vewebhu vanogona kutora mhinduro dzakawanda dzekuverenga pasina.Izvi zvinogona kuvadzivirira nguva yakawanda uye zvino vanogona kuaverenga uye kuongorora kubva kunyaradzo yekombiyuta yavo nekungoomesa bhomwe rimwe. Iyo inovaponesa maawa ekuedza kuedza zvose izvi data pachako. Somugumisiro, ivo vashoma vanovimba nehutachiona hwehutano hwehutano, sezvavanogona kuverenga zvidzidzo zvavo gare gare.
Tsvaga Vashandi Vanokwanisa
Vatungamiri vazhinji nhasi vanoedza kutsvaga vashandi vekutsvaga kuti vabatane neboka ravo kana vanotsvaka basa vari kuedza kuwana vanhu kune imwe nzvimbo. Kana uchishandisa zvishandiso izvi, vanogona nyore kuwana vanhu vavanoda.
Tsvaga Maruji Emitengo Yenguva Pfupi
Kana vakatarisa kutarisa mitengo yemimwe michina, vachishandisa web scraping vanogona kuzviwana. Kushanda kwewebhu kunogona kuvabatsira kuti vaone zvose zvinodhura zvavanoda kubva kune dzimwe nzvimbo dzekutsvaga mumitambo nemisika.